Gubkin विश्वविद्यालय - यो भनिन्छ रूपमा, धेरै विद्यार्थी - देश मा शीर्ष दस विश्वविद्यालयहरु बीचमा। मानिसहरूले यसलाई गर्न इच्छुक संख्या हरेक वर्ष बढ्दै छ, र यो आश्चर्यजनक छैन, किनभने तेल र ग्याँस प्रविधिहरू को विशेषज्ञहरु लागि माग। यस लेखमा भर्ना नियम बारे विश्वविद्यालय को सुविधाहरू, साथै प्रतिक्रियाहरू आफूलाई विद्यार्थी र स्नातक बारेमा जानकारी प्रदान गर्दछ।
Gubkin रूसी राज्य विश्वविद्यालय तेल र ग्याँस को आई एम Gubkina को मास्को खनन एकेडेमी र मास्को तेल संस्थान Gubkin नाम को तेल संकाय को आधार मा 1930 मा स्थापित भएको थियो पछि नाम। यो मास्को को मुख्य पक्षको को एक मा, राजधानी को "शैक्षिक" जिल्ला स्थित छ। संस्था को कानूनी र वास्तविक ठेगाना नै हो: Leninsky Prospekt, 65. विश्वविद्यालय को निर्माण एकदम fashionably देखिन्छ, र तिनीहरूले क्षेत्रमा घेरेदार आंगन उच्च बार गढा छ कब्जा। विश्वविद्यालय गर्न प्रवेश मा शिक्षाविद् स्मारक खडा Ivanu Mihaylovichu Gubkinu, मा जसको सम्मान र विश्वविद्यालय नाम।
विश्वविद्यालय अब9संकाय र दिशा, प्रत्येक जो, एउटा तरिका वा तेल र ग्याँस उद्योग संग जोडिएको अर्को संचालित। त्यहाँ रूस मा, तर पनि मध्य एशिया मा मात्र यो संस्थाले धेरै शाखा छन्। अश्गाकुरा मा, तुर्कमेनिस्तान मा - तिनीहरूलाई एक ताशकहरुट, अन्य मा, उज्बेकिस्तान को राजधानी मा छ।
Gubkin विश्वविद्यालय MGA तिनीहरूलाई को कुहिएर गठन भएको थियो। टी। stalin 17 अप्रिल, 1930, को सोभियत संघ को सर्वोच्च सोभियत को मास्को खनन एकेडेमी आधारमा छ स्वतन्त्र संस्थाहरू स्थापना मा एक उर्दी जारी गर्दा। खनन, nonferrous धातु, पीट, फलाम धातु, जियोलोजिकल अन्वेषण र तेल: निम्नानुसार यी थिए।
संस्था को पहिलो rector शिक्षाविद् इवान Mihaylovich Gubkin नियुक्त गरियो। पहिले, उहाँले खनन को एकेडेमी शिक्षालाई कर्मचारी को एक सदस्य थियो, यो प्रशिक्षण ईन्जिनियरहरु र प्राविधिक क्षेत्रमा लागि उच्च विद्यालय संगठित जसले थियो। आफ्नो नेतृत्वको अन्तर्गत प्रशिक्षित गरिएको छ जो व्यावसायिक कर्मचारी कारण, सोभियत उद्योग ती वर्ष, अभूतपूर्व हाइट्स मा हासिल गरेको छ।
पहिलो वर्ष राज्य विश्वविद्यालय तेल र ग्याँस को लागि सजिलो थिएनन्, तर तिनीहरू सबै भन्दा महत्वपूर्ण रूपमा इतिहास तल गए। त्यतिबेला यसलाई पत्ता र, तेल वेल्स को नयाँ क्षेत्रहरू विकसित प्राकृतिक स्रोतहरू को निकासी र यातायात लागि आधुनिक बोट आविष्कार र सबैभन्दा महत्वपूर्ण थियो - तेल र ग्याँस उद्योग को अत्यधिक योग्य विशेषज्ञहरु द्वारा बनाइयो।
विश्वविद्यालय को संरचना: संकाय र दिशा निर्देशन
यसलाई भनिन्छ रूपमा, धेरै विद्यार्थी - - "स्ट्रोक" को मुख्य मिशन "नयाँ ज्ञान को उत्पादन र घरेलू तेल र ग्याँस प्रविधिहरू विकास र देशको योग्य सुनिश्चित" छ।
RSU तेल, ग्याँस, जो मुख्य निर्देशन साथै, रूपमा स्वतन्त्र एकाइहरु काम संकाय र पनि छ एक सैन्य विभाग। यहाँ प्रवेश्य परीक्षा मा अंक को आवश्यक नम्बर टाइप गरेर प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ मुख्य क्षेत्रहरूको सूची छ:
भूविज्ञान र भूमौतिकी को संकाय, 1930 मा स्थापित भएको थियो। मुख्य विशेषज्ञता - नयाँ तेल र ग्याँस क्षेत्रहरू को खोज। यो प्रत्येक जो स्नातकहरूलाई तयार 8 विभागको हुन्छन्।
तेल र ग्याँस क्षेत्रहरू को संकाय विकास - विश्वविद्यालय को मुख्य विभाग छ। यहाँ संचालित दस विभाग र दुई संस्थानहरुमा पनि नयाँ प्राविधिक उपकरण संग प्रयोगशाला को विद्यार्थी खुला छन्।
यांत्रिक को संकाय तेल र ग्याँस सुविधाहरु को डिजाइन को क्षेत्र मा विशेषज्ञहरु गाडिहरु।
तेल-ग्याँस को राज्य विश्वविद्यालय, 1930 मा फिर्ता गठन जो विभाग मा अर्थशास्त्र र व्यवस्थापन को संकाय, अर्थशास्त्रियों र प्रबन्धकहरू नयाँ पुस्ता तयार छ। भविष्यमा अर्थशास्त्र को संकाय को स्नातकहरूको सरकार मा उच्च ओहदा, साथै तेल र ग्याँस कम्पनीहरु पकड सक्छ रूपमा, सबै भन्दा प्रतिष्ठित क्षेत्रमा एक मानिन्छ।
Gubkin रूसी राज्य विश्वविद्यालय तेल र ग्याँस को: दर पारित र आय नियम
पास दर - यो एकीकृत राज्य परीक्षा मा अंक को संख्या। औसत मा, एउटा कुरा के तपाईं 75 डायल गर्नुपर्छ, तर यो भर्ना र प्रवेश को नियम हरेक वर्ष फरक बुझे गर्नुपर्छ। यस कारण, विगतमा हामीले वर्ष प्राप्त तथ्याङ्क राम्ररी हेर्न सिफारिस गर्छौँ। उदाहरणका लागि, मा 2015 त्यहाँ स्कोर पारित एक अभूतपूर्व वृद्धि दर थियो - केमिकल इन्जिनियरिङ र पर्यावरण विभाग न्यूनतम सीमा तीन कुराहरू लागि 260 अंक totaled।
भर्ना नियम एकदम सरल छन् - तपाईं परीक्षा मा तीन विषयहरू पारित गर्न, र त्यसपछि उपयुक्त विभाग चयन गर्नुहोस् र कागजातहरू को प्याकेज पेश गर्न आवश्यक छ। यो उच्च विद्यालय परिणाममा धेरै निर्देशनहरू आवश्यक रूसी भाषा, गणित र भौतिक। भौतिकशास्त्र को रासायनिक प्रौद्योगिकी संकाय मा सट्टा रसायन पारित गर्नुपर्छ र आर्थिक - सामाजिक अध्ययन।
धेरै अन्य रूसी विश्वविद्यालयहरु जस्तै Gubkin विश्वविद्यालय जसमा सहभागिता प्रतिज्ञा केही लाभ आउँदै धेरै प्रतियोगिताहरु, धारण। मुख्य ओलम्पिक खेल "स्टार" 7-11 ग्रेड को schoolchildren बीच भएको थियो, यो प्राविधिक, ईन्जिनियरिङ् र विज्ञान को ज्ञान आवश्यकता विभिन्न विषयहरुलाई मा प्रश्न हो, किनभने एकदम गाह्रो छ।
multidisciplinary ईन्जिनियरिङ् Olympiad को विजेता भर्ना मा लाभ प्राप्त। उदाहरणका लागि, विजेता ओलम्पिक खेल को विषय मिलेको छ कि विषयमा परीक्षा लागि 100 अंक तोकिएको छ।
हरेक वर्ष विश्वविद्यालय तथाकथित लाभ उठाउनेहरू लागि बजेट स्थानहरूको निश्चित संख्या आवंटन। निम्न व्यक्ति एउटा सरकारी स्थिति स्थापना प्रदान निःशुल्क प्रशिक्षण को अवसर:
invalids 1 र समूह 2;
अनाथ (23 वर्ष मुनिका);
प्रवेश्य समूह 1 मा विकलांग छ जो एक अभिभावक शामिल;
ती जसको आमाबाबुले Chernobyl दुर्घटनामा मृत्यु;
बाल्यकाल देखि अक्षम।
भर्ना लागि यो आवेदक को कानूनी स्थिति पुष्टि भएको कागजातहरू सङ्कलन गर्न आवश्यक छ। उहाँले आयोग स्वास्थ्य मूल्यांकन स्थिति सामना गर्दछ जहाँ कुनै पनि क्लिनिक, चिकित्सा रिपोर्ट र राय प्राप्त गर्नुहोस्।
विदेशी नागरिक भर्ना
Gubkin विश्वविद्यालय लगभग सबै देशका विदेशी नागरिक पनि enrolls जो संग शिक्षा र विज्ञान को क्षेत्र मा आपसी सहयोग मा एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको साइन। विदेशीहरू लागि भर्ना नियम पूर्ण रूपमा भिन्न छन्। बरु विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा सञ्चालन आन्तरिक परीक्षा को। परीक्षण ज्ञान र क्षमता प्रत्येक आवेदक आकलन गर्न रूपमा यस्तो तरिका सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ। मात्र पूर्ण रूसी भाषा मा परीक्षा पास र प्राविधिक विषयहरू पर्याप्त अंक गोल गर्नेहरूलाई जम्मा। साथै, विदेशी नागरिकहरु लागि मात्र शुल्क लागि प्रशिक्षण प्रदान। शिक्षण शुल्क (तेल-ग्याँस को RSU त यहाँ तिनीहरूले अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय संग तुलना मा हो, कम मूल्यहरु को नीति छ धेरै कम छ) प्रति अध्ययन वर्ष 200 हजार rubles को एक औसत छ। स्नातक कार्यक्रम को लागि 300 हजार rubles र मालिकको 295 हजार rubles - व्यवस्थाको संकाय सबैभन्दा महंगा छ।
यहाँ विदेशी नागरिकहरु को भर्ना लागि कार्य योजना छ:
, रूसी भाषा सिक्दै आवश्यक भएमा मा पाठ्यक्रम लिनुहोस्।
दिशा चयन र संकाय (32 स्नातक कार्यक्रम, 22 - र 44 स्नातक - स्नातक)।
को पार प्रवेश परीक्षा, 12 देखि 16 सम्म ठाउँ लिन जुलाई जो।
29 अगस्ट सम्म, कागजात, मूलहरू सहित एक पूर्ण प्याकेज पेश गर्नुहोस्।
देश भिसा सम्झौता छ भने, तपाईं एक विद्यार्थी भिसा लागि रूसी वाणिज्य दुतको कार्यालय सम्पर्क गर्नुपर्छ।
हामी मात्र प्राप्त सूचीमा भने भर्ना हुन, को शिक्षण भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ।
Gubkin रूसी राज्य विश्वविद्यालय तेल र ग्याँस को: समीक्षा
धेरै विद्यार्थी त्यहाँ एकदम कडाई उपस्थिति निगरानी छ भन्छन्। तिनीहरूले शिक्षकहरू लेक्चर सञ्चालन र प्रशिक्षण समयमा पूरा समर्पण आवश्यकता धेरै रुचि जस्तो। विद्यार्थी यहाँ समीक्षा आमाबाबुले विश्वविद्यालय राम्रो सामाग्री र प्राविधिक आधार हो भन्छन्।
यसको अस्तित्व को 90 वर्ष भन्दा बढी विश्वविद्यालय Gubkin आधुनिक प्रविधि संग संयोजन मा यो विश्वविद्यालय मात्र होइन रूस मा तर पनि विश्वव्यापी सबै भन्दा राम्रो को एक बनाउन जो उत्कृष्ट बलियो परम्परा, संग संस्था तस्वीर प्राप्त।
क्यूरेटर - उहाँले हुनुहुन्छ?
आर्थिक विश्वविद्यालयहरु मास्को: मूल्याङ्कन र समीक्षा। मास्को मा राज्य आर्थिक विश्वविद्यालयहरु
को अवधारणाहरु बुझ्न। स्नातक - यो ...
Shchukin स्कूल: भर्ना, समीक्षा
मास्को राज्य प्राविधिक विश्वविद्यालय (MSTU) Bauman पछि नाम: वर्णन, विशेषता र समीक्षा
रातो currant: स्वास्थ्य गर्न लाभ र हानि, क्यालोरी
घर लोडर: को उत्पादन को लागि निर्देशन
घरेलू रक संगीत को दुनिया मा मुख्य सांगीतिक कार्यक्रम - पर्व "आक्रमण" कहाँ छ?
को installment एक ऋण फरक छ र के राम्रो छ?
स्वर्गदूतले दिन। Veronica - रहस्य को नाम
जब Pushkin को स्मृति को दिन?
चीची गर्नु सिजन - अमिल्दो बब
सुविधा र कार सामान लेक्सस Lx 570
लाभ र हानि: संग भिटामिन डी क्याल्सियम citrate